MAA DHUGAA ITTIN HIMNE? -
bilisummaa March 11, 2014	Leave a comment
Dhiiroo numa jiraa kan Juneeddii faarsu?
Gaarii dalageen kan isa leellisu
Hamtuu isaa dhooysee kan baala irrat cabsu
Akkamitti taha dhugaa jirtu dhooysuu
As bahaa dubbadhaa kan Juneeddii faarsu.
Mee seenaan isaa kan itti faarsitan
Mee as himaa gaa warri isa leelliftan
Gaarii inni hoojjate mee tamuma himtan?
Sa duuba maalumaaf caayaa irra qabdan?
Barataaf barattuu Barsiisaaf barsiiftuu
Daldalaaf daldaltuu qonnaan bulaaf tiiyfattuu
Tokkolleen gaarii isarraan himatuu
Kan isa faarsu as bahaa jiraatu.
Barattoota meeqaat sababa isaa dhume,
Hayyoota meeqaatu isaan awwaalame,
Oromoota taphaat biyyaa ari’amee?
Gochaan Juneeddii hin dhumu himamee.
Gaafa bosonni Baalee gubatee belbele
Barattoota dhaamsuuf hiriira gale,
Meeshaa waraanaan waraanni haleele
“Teeknooloojii hin qabnu nuti qawwee malee”
Jechuun kan dubbate eenyu isa malee?
Nu garaa hin baane gochaansaa har’allee
Akkamitti callifna laalaa guyyaa kalee.
Lammii irraa dhalatte saba kee miitee
Namaa-Sa’aan tollee hunda madeeysitee
Xiqqaa fi guddaa hunda laaleeysitee
Alagaan gaafattii si ergataa turte,
Akka haancootti alalchuun si tufte.
Tokkolleef hin tollee garayyuun jibbamtee
Saba keenya guddaan ajeeysaa dibamte.
Faagaa nutti bahuun lammii tee gurgurtee
Garaa misoomsuuf alagaa aanfattee
Saba kee ajjeesuun kan hafanis hiite
Silaa akka keetii umrii dheereeyfattee
Garuu hin bubbullee salphina uffattee
Dubbiin tee arra funyoo udaan buutee
Namayyuun jibbamtee gadi galoo taate.
*Dhaamsin an dhaamu warra hafanitti,
Shira hin dalagin saba kee irratti
Harka hin kannin garaaf alagaatti
Juneeddii laalladhu akka fakkeenyaatti
Ifitti amanii deemi mataa keetti
Mataa gadin qabin diina kee jalatti!
Ani xumuree jijjiiraa hujiitti.
Dhaamsi kiyya kanaa arraaf nagayatti!
Previous MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Sadaffaa
Next Tuni gaddaa miti Gammachuu fakkaattii..